Nin u dhashay Dalka Canada oo la sheegay inuu Gabar Soomaali ah Dalkaasi ku Weeraray – Balcad.com Teyteyleey
Nin u dhashay Dalka Canada oo la sheegay inuu Gabar Soomaali ah Dalkaasi ku Weeraray
Booliska Magaalada Edmonton ee Dalka Canada ayaa sheegay in Gabar Soomaali ah oo ku nool magaaladaasi Weerar lagu qaaday, Booliska ayaa sheegay in weerarkaas uu geystay Nin Caddaan ah oo u dhashay Canada.
Falkaaan ayaa dhacay xilli ay Gabadha Soomaalida ah ee lagu weeraray Magaalada Edmonton ayaa la sheegay inay Gaari kaxayneysay islamarkaana uu Aflagaadeeyay ninka Cadaanka ah, waxaana Gabadha Soomaalida ah lagu Magacaabaa Nuurto C/raxmaan.
Dhanka kale Booliska Edmonton ayaa sheegay in Cabdullahi Xasan Shariif oo 30 Jir ah uu Gaari dardarsiiyay koox dad ah islamarkaana shan qof dhaawac u geystay, waxayna cabsi ay soo food saartay Soomaalida ku nool Magaalada Edmonton.
The post Nin u dhashay Dalka Canada oo la sheegay inuu Gabar Soomaali ah Dalkaasi ku Weeraray appeared first on Ilwareed Online.
SOOMAALIYA OO DIB UUGA FIIRSANAYSA KAMID AHAAN SHAHA JAAMACATUL CARAB!
Kooxo Hubaysan oo xalay qof ku dilay Boosaaso iyo Daacish oo sheegatay falkaasi dilka ah.